USA: Robot-yada oo hawsha shaqaalaha la wareegi doona sannadka 2030ka – Kasmo Newspaper
USA: Robot-yada oo hawsha shaqaalaha la wareegi doona sannadka 2030ka
Updated - March 28, 2017 10:36 am GMT
Dalka Maraykanka, 15ka sano ee soo socota gudahooda, 38% shaqooyinka dadku qabtaan waxaa la wareegi doona aaladaha is-wada ee Robot-ka loo yaqaanno.
Ifafaaluhuna wuxuu khuseeyaa xitaa Yurub iyo Asia, iyada oo habkaas is-wada (Automation) laga bilabay, si uu u baddelo shaqada dadka, Jarmalka (35%), Britain (30%), Japan (21%).
Xogtan waa midda ku jirta daraasad ay jimcihii hore baahisay PWC (PriceWaterhouseCoopers) oo ah Shabakad fadhigeedu yahay London oo ay ku bahoobeen Shirkado adeegyo bixiya. Taas oo ka caawinaysa sidii loo fahmi lahaa sababtii Milkiilaha Microsoft, Bill Gates, ugu taliyay hadda ka hor in la canshuuro Robot-yada shaqada ka qaadanaya Aadamiga.
Darasaddu waxay ku fadhidaa qiyaasaha hadda jira ee ku saabsan xawaaraha iyo ballaarinta awoodda habka is-wadista (Automation) iyo caqliga macmalka ah (Artificial Intelligence) samayn doonaan sanadada soo socda.
Mar haddii an la hubin kaltanka soo-noqnoqoshada, jihada iyo heerarka uu ku socdo horumarka Teknoloojiyada, baarayaashu waxay ka digayaan in saadaashoodu ahayn wax meel ku sii qoran.
Laakiin marka laga dhaqaaqo arrimaha hadda gacanta ku jira xisaabuhu waxay noqonayaan sidatan: ugu badnaan 3 dalool oo 1 meel, shaqooyinka maanta ka jira bulshooyinka warshadaha ka hormaray, waa la wayn doonaa 15 sano gudahood.
Farqiga boqolleyda ee u dhexeeya dalalka oo kor lagu soo sheegay waxaa lagu macnaynayaa, guud ahaan, heerka horumarka iyo waxbarashada dalalkaas; shaqooyinka ugu badan ee halista galayana waa kuwa an looga baahnayn aqoonta uguna badan Maraykanka, marka loo eego Yurub iyo Asia.
Sida qaybaha soo-dhoweynta, adeegyada quutul-daruuriga, xamuulka iyo kaydinta, darawaliinta gaadiidka waxay noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee shaqooyinka lumin doona, marka farsamada kaxaynta dareewal-la’aanta ah si fiican loo taabba-galiyo.
Laakiin dad badan lama dhacsana saadaasha, tusaale ahaan, Steven Mnuchin, Xoghayaha Maaliyadda Maraykanka , wuxuu qabaa in xilliga soo-ifbixitaanka Robot-ku uu aad u fogyahay oo 50 ama 100 sano ka dib tahay.
Wuuna ku daray: “habka is-waditaanku wuxuu khusayn doonaa shaqooyinka lacagaha hoose lagu qaato oo qur ah, sidaa darteed waa in la maalgaliyo waxbarashada iyo tababarrada dadweynaha si ay u buuxiyaan shaqooyinka Robot-yadu ayan qaban kari aqoon.
Xadeymo kale waxay ka iman doonaan dhibaatooyinka la socda horumarinta Teknolojiyada ama xeerarka siyaasadda qudheedu ku badbaadinayso aadamiga ama lagu khafiifinayo bilowga kala-guurka.
In kasta oo lagu talagalo arrimahaas oo idil, haddana dariiqu wuxuu u muuqanayaa mid jeexan: hadba inta ay horumar samaynayaan habka is-wada iyo caqliga macmalka ah lagama fursan doono sidii loo manaafacaadsan lahaa faa’iidadooda.
Laakiin mashkiladdu waa sidii loogu diyaargaroobi lahaa kala guurka loogana yeeli lahaa mid faa’iido u leh aadamiga ee an dhibaato u lahayn oo ka xoreynaya shaqooyinka ayan jecleyn, una diyaarinaya kuwa xiisaha u leh oo ay baahanyihiin.